Isithunzi elikhulayo ezinye ukuqeqeshwa amakhono iziteleka, ngasizathu simbe, wonke umuntu ofuna ukufunda ukuba izivakashi, isazi sokusebenza kwengqondo, umphathi, umxhumanisi wokubambisana nokunye. D. Nge isithunzi lezi ubuchwepheshe, maye, sikhulela nobuze babo, futhi phakathi nalesi amadiploma ngokuya lwesayensi Ochwepheshe ewumngcingo, ikakhulukazi imithi. Tadisha phezu udokotela - a nzima kakhulu, kodwa kuwumsebenzi kuncomeka kakhulu. Quality yezokwelapha izimfuno zemfundo esuka kubantu abasha emakamu esiphezulu imizamo yokufuna ulwazi, amakhono, ukuthuthukiswa kwawena. Ezweni lethu, hhayi eningi ezinhle ngempela yisakhiwo sodumo Medical University, kodwa Russian National Research Medical University - omunye wabo.
amaqiniso Jikelele mayelana Russian National Research Medical University
University uthatha indawo 27 kule simo nezinhlangano ephakeme Imfundo Russia, ngokuvumelana ngamazwe isilinganiso ejensi "Isazi RA", futhi endaweni yesibili ku simo efanayo phakathi izikole zezokwelapha. Phakathi abathweswe iziqu kwakhona izifundiswa eziningi owaziwa, odokotela omuhle kakhulu ahlukile.
Namuhla kule nyuvesi kuphela kuleli zwe ukuthi linikeza ukuthi kungenzeka ukuthola diploma double isampula European.
RNIMU yasungulwa emuva ngo-1906. Khona-ke le nyuvesi yesimanje yayisebenza njengenkantolo izifundo lomame. Kusukela ngo-1930, le nhlangano has isimo State Medical Institute, futhi kusukela ngo-1956 University ine elikhulu igama udokotela ohlinzayo Nikolaya Ivanovicha Pirogova.
Ngemva kokuwa kweSoviet Union University Yaphinde yaqanjwa ngokuthi i-Russian National Research Medical University yaqanjwa NI Pirogov (RNIMU). Iminyango, amakhono kanye neminyango zezemfundo futhi yamaLuthela, kusukela izinga ezenziwa yile nyuvesi wawanika okungaphezu kwalokho isilinganiso esikhungweni semfundo. RNIMU ngomunye izikhungo ngobukhulu futhi ohlonishwa kakhulu ngokwesayensi, ucwaningo kanye wezokwelapha waseRussia.
Inyuvesi waqhubeka wanda kancane kancane, kodwa eqa entsha okukhulu ekuthuthukiseni ke wenza ngo-2010, lapho ethola isimo "National Research University".
Iyiphi indawo engcono kakhulu komngane enemininingwane nge umlando eyunivesithi - kuyinto Museum yayo, esemgwaqweni isakhiwo main phansi 4th. Ngoba bonke labo abafisa ukuvula ngoMsombuluko ntambama.
campus ingqalasizinda RNIMU
Ukuze inqubo yaseyunivesithi umnyuziki akukhona ukuthi kubaluleke kuphela babe abasebenzi othisha abafanelekayo futhi isisekelo esiqinileko yesayensi, kodwa futhi Logistics yesimanjemanje. Abafundi lula kakhulu futhi ezisebenzayo ukuze sizuze ulwazi induduzo lula.
izikhungo ezimbalwa kakhulu zokufundisa ziye zasungula isizinda esinjalo impahla kanye nengqalasizinda esifanele wonke-round ukuthuthukiswa njengoba RNIMU. Nokho, ku- abafundi, aveze ukuthi ezinye icala futhi, ikakhulukazi, ehostela isikhathi ukulungisa kanye ennoble. Izinsolo asemqoka ahlobana kubafundi ukuthi izilaleli, ikakhulukazi uMnyango nehhovisi inhloko yesikole sika njalo olusha, nokuthi kukuwe izakhiwo umfundi ezifana amahostela noma egunjini lokudlela, izandla zakhe zonyaka ungayifinyeleli ngonyaka.
Muscovites Abaningi yemukele izindaba imililo emibili emikhulu e-campus Okwesibili Medical. Kugcine kwenzeka ngo-May 2015. Ngemva kwalokho isakhiwo Wephula elinye emahostela ngenxa ekushoneni kwabafundi abafundi abathathu e-Afrika naseNingizimu-mpumalanga Asia, okungenani abantu abathathu zinokulinganiselwa yokulimala obuhlukahlukene. imithombo ukuthungela okuthiwa isimo esibi zokuthunyelwa, ngaphandle kungekho kweminyango umlilo esakhiweni.
Ngokuqondene izikhungo zemfundo, zingabantu zisesimweni esikahle futhi imishini efanele ukugubha ngisho abafundi olubandlululayo kakhulu. Izethameli zinama kahle, abaningi babe multimedia namaphrojektha, Wi-Fi. Ezingosini zezingxoxo laboratory nezethameli ukuze umzimba esisebenzayo, ikakhulukazi ku-ikhono ekhemisi eziphilayo, balandela izidingo ezikhethekile ukuphepha Improvement (flooring lesifanele, ukupholisa nokunye. D.)
Enye ifa zenkolo nokuziqhenya inyuvesi - a umtapo ucwaningo enkulu. Izimali esitolo, ahlanganise indawo engaba 6759,6 square metres. m, imisebenzi ezibalulekile zesayensi, izincwadi, ama-editions eziphambili. Inama ihholo umtapo kwezihlalo 175, iyatholakala-Wi-Fi kanye nomtapo electronic okubhaliselwe ukuze nakomagazini ehola emhlabeni.
At onawo abafundi 'kuyinto enkulu yezemidlalo e 8 mahholo amakamelo kokushintsha, nanjengezihlambi, kanye eziyinkimbinkimbi zemfundo kanye nezemidlalo "Konakovo", isendaweni ibhange we iVolga futhi ahlomele unyaka wonke ukusetshenziswa.
izikhungo zocwaningo, umkhuba isizinda, internship RNIMU
Le nyuvesi ngamisa ngo-2011 Educational Center ezothola Innovative Medical Technologies. Kuyinto emgwaqeni. Ostrovityanova 1. Opening we Centre bavunyelwe ukuletha ileveli entsha ukuqeqeshwa sephrofayela kuhlinzwa. Abafundi nethuba bayoqeqeshwa okusebenzayo kanye ucije amakhono usebenzisa imishini yamuva.
Isikhungo esiyingqayizivele yezesayensi nasezinzuzweni zemfundo "Eziphuthumayo e-Pediatrics" wavula kwi RNIMU isisekelo. Izibuyekezo ochwepheshe nabafundi waphawula nesidingo esiphuthumayo izikhungo ezifana wonke amanyuvesi sephrofayela wezokwelapha. Ngesikhathi workshop abafundi nethuba okuqhubekayo inqubo yemfundo ohlelweni ucije amakhono ukunakekelwa okuphuthumayo ezinganeni.
Le nyuvesi inelayisensi sihlinzeke izinhlelo zokwelapha iziguli. Lubhekele lolu Research Institute Clinical of Pediatrics yaqanjwa academician YE Veltischeva, kuyinto ehamba phambili izikhungo ezingane yezwe.
Russian Gerontological Ucwaningo Centre Clinical ngesikhathi iriseshi yaseyunivesithi ezisekelwe futhi uqhuba imisebenzi njengenhlangano isikhungo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya.
Amaphrofayli lokunakekela: ukuhlola laboratory, Endoscopy, Radiology, ukuhlola ukusebenza, ukuhlinzwa, Urology, nezenhliziyo, Neurology, ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane, amathambo, njll ...
Ukwakheka University: amandla, iminyango, izimpiko
Isakhiwo zemfundo nyuvesi has 8 amandla, ngamunye esiqeqesha eziningi amakhono.
uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha. Kuyinto isimo esidala nesiphansi kunazo ubuhlakani inyuvesi. Le nyuvesi uthola ukuvunyelwa ukuqeqesha Ochwepheshe e umsebenzi zokwelapha. Uhlelo ukuqeqeshwa yakhelwe iminyaka 6. Imodi cwaningo - esigcwele. I Unembeza cishe 40 iminyango amaphrofayli wezokwelapha (ukuhlinzwa, Oncology, oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo, Urology, ukwelashwa esibhedlela, zamehlo, wezifo zengqondo, imithi izinsalela, Neurology, nokunye. D.).
Isikole samazinyo, nesebenzela ngesisekelo zindawo ezimbili. Umncintiswano enkulu kulolu ubuhlakani kungenxa hhayi kuphela ukuthandwa elikhulayo okukhethekile acute, kodwa futhi yinkimbinkimbi ukuqeqeshwa of ochwepheshe abafanelekayo kwamazinyo. Ukuqeqeshwa sihlanganisa sisebenze iziguli zangempela ukuqala ngonyaka wesine ngaphansi kokuqondisa udokotela. Quality ukuqeqeshwa ayisisekelo aphathelene nokwelapha, honing amakhono awusizo futhi inhlukano ngcono - yilokho ifomula ekahle ekulungiseleleni ochwepheshe zamazinyo RNIMU Pirogov. Izibuyekezo abaphothule kanye nabaqashi babo mayelana izinga kanye eseyintsha lwati lolutfolakele, ukubaluleka kwabo okuwusizo asivumela ukuba ushayele Dental Faculty RNIMU omunye the best eMoscow.
Faculty of Ikhemisi izitimela Ochwepheshe bebheke "Ikhemisi". Abafundi ukuthatha umkhuba, hhayi kuphela ezibhedlela kodwa izimboni ezenza imithi.
Faculty ukuqeqesha bamazwe angaphandle. Le nyuvesi ligcinwe amakhono esemqoka wezokwelapha Ukuba nabafundi bakwamanye amazwe. Ezifundweni esigcwele mayelana 1,000 abafundi abavela emazweni angaphezu kuka-60. Ukuqeqeshwa iqhutshwa isiRashiya, kodwa ukuxhumana kanye ukumuncwa kangcono indaba kabili ngesiNgisi.
uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha begazi. Ngezinye Faculty ukulungiselela longcweti abaqeqeshwe ngokugcwele eyala emitholampilo wesimanje wesayensi bezokwelapha. Ukugcizelela ku inqubo yemfundo ngesikhathi ICF wenza ayisisekelo ukuqeqeshwa nocwaningo imisebenzi theory. I Unembeza neminyango 20. Ukhiye:-X-ray ukuhlola, ngokuzivikela komzimba ezifweni, izakhi zofuzo, nanobiotechnology. Kuyinto lezi okukhethekile ngokuyisisekelo ukuhluka lwasemtholampilo, izindawo cishe ewusizo oqabulayo ibhizinisi. Basebenza esengeziwe esikhathini esizayo yesayensi yezokwelapha, olwenziwa ucwaningo lihamba phambili ku izifo ezinkulu kanye lokwelatshwa. indlela ethembisa Ikakhulukazi - Ukutadisha yokulungiswa izifo ezibangelwa ufuzo futhi zezinzwa.
ubuhlakani Psycho-social ihlanganisa 4 nezihlalo silungiselela ongoti "Clinical Psychology". Uma sihlaziya ukubuyekezwa yokufundisa, Faculty RNIMU "imfundo Psycho-social" has a lot of izinzuzo core eliyisisekelo ezikuvumela ukulungiselela ochwepheshe isayensi yokusebenza kwengqondo. Iqiniso lokuthi odokotela bengqondo silungiselela izikhungo eziningi ezahlukene ezikhethekile (zemfundo kanye nezomnotho), kodwa kuphela emayunivesithi yezokwelapha ungakwazi ukuqeqesha Ochwepheshe afanelekayo ngempela uyakwazi ukusebenza pathologies okukhulu ubuntu sifo, uthi emnceleni.
Oholela ubuhlakani ezingane kuleli zwe kwavulwa eminyakeni pre-impi. Ngezinye izikhathi ezahlukene, izifundiswa eziholayo engcono odokotela zezingane wezwe zazisanda kuphothula khono RNIMU. UMnyango ubuhlakani ezingane (ka 54) best kuleli zwe, isilinganiso nothisha ephakeme degrees bezemfundo (Dr. med., Likaprofesa, abazobhapathizwa bavuma).
Inqubo yokufunda ngokwekhono ubuhlakani ezingane ngokuyisisekelo ezahlukene, kuhlanganisa eziningi eyala ngokwengqondo ezibalulekile, kwenziwa slant on ukuthuthukisa lokuxilonga kanye nama-practical. Nezitulo abasebenza ezindaweni zezempilo eziyisisekelo. Ethandwa kunazo zonke emnyangweni, futhi, ngokwemvelo, okukhethekile ne umncintiswano enkulu: Pediatric Dentistry, uMnyango Ukuhlinzwa Pediatric, Neurology.
Ezinye umnyango ibhekwa njengomlando wesonto obaluleke kakhulu, njengoba yenziwa ukuqeqeshwa abafundi, kungakhathaliseki ukuthi iphrofayela yabo, ukufundisa izifundo ezibalulekile jikelele, isibonelo, "Kubaluleka ukunakekelwa." Lezi zihlanganisa uMnyango propaedeutics izifo zezingane RNIMU. abafundi lezivakashi uqaphele ukuthi kubaluleke kangakanani isikhathi yokuthola ulimi olulodwa nothisha kulezi izihlalo ngoba Ziningi izifundo e-course ngayinye.
International Faculty RNIMU Pirogov: nokubuyekezwa nokubambisana namanyuvesi European futhi American
Kufanele kucace ukuthi umehluko oyisisekelo phakathi wezifundo imfundo kulamanye emave kanye ubuhlakani ngamazwe. Eyokuqala kuthatha ibandulo labaSebenzi izakhamuzi elivela kwamanye amazwe, kanye nezinye kusiza izakhamizi Russian ukuthola diploma double isampula European.
Ukuhunyushwa kwalesi ubuhlakani lungatholakala inani abafundi-ngonyaka wokuqala ngenxa uvivinyo IMAT.
Lokhu kusebenzisana kuwumsebenzi esiyingqayizivele kohlaka WaseRussia, kodwa European lwezifundo nokubambisana inyuvesi sekuyisikhathi eside mkhuba ovamile.
abafundi Dual degree kungenzeka ukuthola okukhethekile "Medicine". Kuze kube yimanje, ekuphathweni inyuvesi ezivumelanisiwe isimiso sokuqeqeshwa izifundo, nokubonga, umthwalo, bayibuke le video, University of Milan.
Kuhlelwe nokuba esiseduze esizayo Ukuqhathanisa uphiko lokuqeqeshela ezokwelapha nezinto eziphilayo e-University of eTurin futhi RNIMU lwezifundo.
Abafundi bokuqala libhaliswe uMnyango International ngo-2014, ukuze ngokubona iziqu abaqashi babo mayelana nekhwalithi ulwazi kanye ubuqiniso idiploma ayikakwazi ukwazi. Nokho, abafundi khono kuze kube imininingwane lokufundisa ezithophayo kakhulu.
International Medicine - Faculty RNIMU, onikeza ithuba uthole diploma ngesikhathi esifanayo amayunivesithi amabili. Kodwa umthwalo isofthiwe abafundi futhi ephakeme, izivivinyo zingafundwa YaseMoscow University, kodwa kuthatha kubo kuphela ikhomishana othisha e-University of Milan.
izinhlelo Ibhajethi, inombolo yezindawo
Okwesibili Medical University amukela izicelo Lwezinhlelo uhulumeni ngezithukuthuku ngokwabiwa kwemali. Kuye inani isabelomali ubeka ngezinga kuyahlukahluka. Ngokwesibonelo, e "Medicine" inombolo yezindawo zomphakathi - 600, "Pediatrics" - 450 "Dentistry" - 45. 10% ezindaweni isabelomali zabiwa phakathi abafundi ukudlula owathi quota ekhethekile (abakhubazekile, izintandane nezingane Veterans). Inombolo nezinsuku izivumelwano cishe isigamu ngezansi ukuze uthole umsebenzi ngamunye.
University kunesithembiso izinsuku evulekile njalo ukunika amandla izicelo zangaphambi bajwayelane iprogramme, ukulinganisa amathuba abo yokwemukela, ukuthola ulwazi olunembile kakhulu inani lezihlalo kwi okukhethekile abakhethiwe, uhlu kwemibhalo, nokunye. D. Ungase futhi ukuxhumana umfundi esungulwe RNIMU. Izibuyekezo wabafundisi, oda ehostela Sokubambisana ingatholakala engosini ethi nje kubo - yilabo abatadisha ezindongeni sikhungo.
isilawuli Test yolwazi e RNIMU
Emuva ngo-2013, ngaphansi isinyathelo letindzala elwisana nenkohlakalo uhlelo laqanjwa test ukulawula ulwazi abafundi kwezinye izifundo.
Ngokukhethekile yakhelwe ukuhlolwa bafundi kwakufanele athathe kanye ikota kwimodi inthanethi ekilasini nge video ukubhekwa. Lolu hlelo, kuye kwabangela ekuqaleni eziningi ezibangelwa ukungaqondani phezu ingxenye abafundi kanye nothisha. Yena ngempela angabekwa kungenzeka ukugwazela noma kugcizelela abafundi, kodwa eminyakeni yokuqala kukhona okuningi ukuphoxeka ngenxa dampness lezi ezintsha.
Futhi, kwaphakama umbuzo mayelana nokunemba kokuhlaziywa yokuhlola ulwazi lwabanye. Ngempela, iningi nezokwelapha zidinga amakhono awusizo kakhulu futhi kohlaziyo. Eminyakeni eyalandela siye ithuthukiswe uhlelo esingakaphothulwa, futhi manje isebenta kahle. Sethule ezingeni elisha ngemva umfundi test imisebenzi ithatha ukuhlolwa ngomlomo ngaphezulu, futhi kwezinye amakhono kanye credit esisebenzayo.
Uphenyo RNIMU kubo. Pirogov
Ucwaningo Medical University, eyaziwa nangokuthi i-yezokwelapha yesibili. It ngempela ngobukhulu futhi isimo enhlokodolobha kanye neyunivesithi kazwelonke nalo mkhuba eside yokufundisa, ngentuthuko ucwaningo. Uye waba njalo idumela okuqinile kanye ukuthembeka emphakathini ngokwesayensi.
Umuntu ngamunye wabo unombono esiyingqayizivele; Ngezinye izikhathi lokho ukunambitha eyodwa, kuba nhlobo kwabanye. Amanye amazwana subjective kakhulu ngokusobala azibuthonyi ngokuphelele isinqumo wesicelo ukunikela elilandelayo iminyaka eyisithupha ukuqeqeshwa ezindongeni eyunivesithi. Kungcono ukuchitha usuku noma ezimbili, ukuletha evakashele Day Vula noma ubhalisele izifundo zokuqeqesha, ukwakha imibono yabo siqu mayelana nyuvesi. Kodwa ngesilinganiso esifanele sokungabaza kungaba okwanele ukuba sihlaziye ukuthi abafundi bathi mayelana RNIMU. Izibuyekezo bavame ubheke temibhalo yephrozi netindzaba ohlangothini kwansuku zokuphila umfundi, dorms, igumbi lokudlela, ukuminyana, njll ...
Ehostela iseduze izakhiwo academic, ukuya esikoleni kungaba ngempela fast. Igumbi lokudlela, umtapo wezincwadi zesayensi kanye isikhungo yezemidlalo nazo elise on campus. Imibandela ehostela azidunyiswanga eyodwa, isakhiwo ngempela ubudala futhi okudinga ukulungiswa kanye ukubuyekeza global imithetho yokuphepha. Futhi inani lezihlalo lilinganiselwe, ngokuyinhloko ugcwale abafundi quota.
Kodwa ku enkantini elixutshwe ukubuyekezwa. Abaningi Ubhale ukuthi ngemva 2015 izinga lokudla lithuthukile kakhulu, amandla emali sevisi okusheshayo.
abafundi umthwalo Academic ezahlukene beqonda ehlukile, kodwa ngokuvamile inqubo yokufunda kancane sengathi serene isibindi kwentsha. Le nyuvesi kuyinto ngempela eziqinile mayelana nekhwalithi ulwazi abafundi, ngokulandelana, kanye nezinga funa kuphezulu. Kukhishwa ngokwehluleka zezemfundo, zilethwe sekudlule izivivinyo kanye nokuhlolwa RNIMU kwenzeke kaningi.